Abadlali Imodi "GTA: San Andreas," okuyinto esifushanisiwe ngokuthi "Sampo" ( "San Andreas Multiplayer"), luthandwa kakhulu yonke indawo. Iqiniso liwukuthi kule game uthola ithuba lokuwina emuva indima oyikhethile e ngokugcwele idolobha eziphilayo. Kuyohlale kukhona njengawe, gamers abazakunitshela abafuna bafinyelele imigomo yabo. Ngokwemvelo, konke lokhu njengento ebaluleke kakhulu elibukhali - kukhona isethi umxhwele imithetho okumele ilandelwe. Lokhu amehlo ukubukela ekuphathweni, ukuze thuthuva cishe akukho, futhi ungakwazi ukujabulela ukuphila kwakho kwesibili, egijima emhlabeni virtual of San Andreas. Njengoba wazi, wonke imidlalo yochungechunge "GTA" imishini zazibaluleke kakhulu - yebo, ku "Sampo" Le ndlela uhlala elivumelekile, kodwa lapha konke kancane nzima - kufanele ucabange indlela ukuthengisa imoto kule "Sampo" njengoba ukuthenga, indlela uyenze ibe nenzuzo.
Ukwahlukana kusuka ejwayelekile "GTA"
Njengoba sazi sonke kahle, ochungechungeni imidlalo, "GTA" Imishini uhlobo consumable. Ungahamba ngomgwaqo ukukubona bathandile imoto, zilahle umshayeli nihambahambe ibhizinisi labo. I "Sampo" zonke ezihlukene kakhulu, njengoba kukhona umdlalo udlalwa ngokuvumelana nemithetho, eduze ngokoqobo, ukuze i-iqhinga efanayo ungakwazi kweso baboshwe. Ngakho kufanele ucabange indlela ukuthenga inzuzo noma kanjani ukuthengisa imoto kule "Sampo", ngoba kukhona ubuciko. Empeleni, njengoba empilweni - ungakwazi ukuthenga imoto kusuka isimo ngentengo ejwayelekile, noma ungakwazi ukubheka noma yimuphi umsebenzisi ofuna ukuyeka kuwe ethile noma ukuthenga kwakho okuthile. Ngokuvamile, le mishini lapha, izinto eliyinkimbinkimbi kakhulu kunalelo version olulodwa. Kuyoba ke eminye kuxoxwa kabanzi indlela ukuthenga futhi kanjani ukuthengisa imoto kule "Sampo".
Into yokuqala okudingeka ukwazi - wukuthi zonke izenzo kule mdlalo zenziwa kusetshenziswa ekhethekile imiyalo console. Ithengwa kanjani i-, indlela ukudayisa, indlela ukuthengisa imoto kule "Sampo"? Ngenxa yakho konke lokhu, ngeke nje kudingeka ukungena inhlanganisela kwesokudla ilandelana, futhi uthola ukuthi bafuna imoto noma ukuqeda isidina. Ngakho, yini okufanele ngiyenze ukuthenga imoto, ngomqondo ongokomfanekiso, kusukela umakhi, okungukuthi, ngokuqondile isimo, ngaphandle asebenzise nabanye abadlali? Ukuze wenze lokhu uzodinga ukuthola isikhala yokupaka, equkethe umshini ingakamiswa zitholwa nabanye abadlali, ukhethe lowo oyithandayo futhi ubhalise umugqa wemiyalo "buycar" - I-akhawunti yakho izokhokhiswa izindleko imoto, futhi ungakwazi ngokukhululekile ukuyisebenzisa. Ungakhohlwa ukuthi odinga ukukwazi eduze kwemoto ku "Sampo" indlela, ngoba uma uyiyeka zingagadiwe, it kalula ukuhambisana, futhi ungakwazi neze ukuthola isela.
imoto For Sale
Manje wazi kanjani ukuthenga imoto, kanye eduze kwemoto ku "Sampo" enqabeni ukuthi akekho weba kanjani. Kodwa ungakwazi futhi adayise imoto yakho, ukubuyela ku-yokupaka - lesi senzo futhi, akudingi iqhaza zabanye abadlali njengoba uthengisa imoto yakho esimweni. Ukuze wenze isenzo oyifunayo, kufanele ubhalise ithimba "sellcar", ngemuva kokuthi i-akhawunti yakho izofakwa nezimali ezifanele, futhi ulahlekelwa ukufinyelela emotweni yakho. Njengoba ubona, inkinga isixazululekile kakhulu ukumane futhi ngaphandle kwezinkinga. Kodwa ngesikhathi esifanayo wenza transaction kuphela isimo, futhi indlela yokwenza umshini ku "Sampo" umsebenzi kakhulu kube nenzuzo enkulu? Ukuze wenze lokhu, kufanele bephendukela kwabanye abadlali.
Thenga / kunezimoto iqhaza abadlala
Yiqiniso, ungakwazi ukubhekana nazo zonke ikhompyutha - ngakho-ke kuyoba iphephile futhi ivikelekile. Nokho, nawe ukudlala kumaseva yabadlali abaningi hhayi ukwenza! Ngakho ungazama ukuthenga futhi udayisa izimoto esuka kubantu abahlala - kuyathakazelisa kakhulu, futhi indlela enjalo yokuhlaziya isimo ungenza ngisho imali uma ilungelo lokwenza ibhizinisi. Kodwa manje sikhuluma uphiko lobuchwepheshe, ngakho kufanele ufunde indlela wafaka imoto e "Sampo" ukudayiswa. Ukuze wenze lokhu, udinga ukuthola umthengi uyinikele into, uvumelana ngemibandela - ngisho ke ungasebenzisa umyalo "shintsha imoto", ngemva kwalokho udinga ukucacisa inombolo kamazisi womdlali, lapho uya ukuthengisa imoto yakho, bese emva kwalokho, inani ngalo bavumelana. Umdlali kufanele avumelane, futhi imoto yakho kuyoba impahla yakhe futhi imali yakhe ngeke zifakwe ku-akhawunti yakho. Manje ngoba sewuyazi ukuthi indlela ukufaka imoto "Sampo" njengoba isihloko kuthengiselana ukuze uthole kule mali. Eqinisweni, uma Awuyi ukuthengisa, futhi ukuthenga imoto, bese kuba isimiso nse - funa umdayisi bavumelane ngenani bese ulinda kuze kube oyenza ithimba vysheoboznachennyh.
Kunezimo lapho wena ngomzuzu wokugcina anqume ukuba bahoxe ekungeneleni kuthengiselana, noma uphawule ukuthi intengo ngephutha. Kuleso simo, kunomyalo "cchange", okuyokwenza ukuba wenze izinguquko nombuzo lokho okuthumele umdlali. Yiqiniso, kungaba senqabe, kodwa into yesivumelwane sakho eminye - iqembu kufanele bakhumbule njalo futhi usebenzise isikhathi.
Ungacabangi ukuthi ukuthenga imoto - konke onakho. It esadinga ukunikeza uphethiloli, ngezikhathi ilungiswa, amaseva hardcore ikakhulukazi ungase uphoqeleke ukuba baphumelele ekuhlolweni. Kodwa uthola ithuba ukuhambisa ngokukhululekile ngisho nomholo, isibonelo, njengomshayeli wetekisi.
Kuyini ida e "Maynkraft"?
Amakhodi "Skyrim" phezu Dragon Soul. Skyrim: ukukopela amakhodi, amakhono
Imininingwane lapho ukuthola Warframe ukulawula module
Yini ingene bezihlahla ikhukhi Ukugunda
I-placenta ngesikhathi sokukhulelwa futhi yendima yayo ekuqhubeleni ukuthuthukiswa somntwana ongakazalwa
Bank of England: Umlando kanye nencazelo